1. Waa maxay leuprorelin acetate?
2. Leuprolide acetate codsi
3. Sidee ayuu leuprolide acetate u shaqeeyaa
4. Sida loo isticmaalo leuprorelin acetate?
5. Qiyaasta Leuprorelin acetate Qiyaasta iyo Maamulka Leuprorelin acetate
6. Cillada dhinaca Leuprorelin acetate
Leuprorelin acetate waa nooc peptide ah oo loo wada isticmaalo dawooyin kale si loogu daweeyo kansarka qanjirka ragga. Si kastaba ha noqotee, ma daaweynayso cudurka laakiin waxay ka hortageysaa inuu faafo oo ka caawiyo xakameynta saameynta kansarka qanjirka 'prostate' ee jirkaaga. Leuprorelin waxaa lagu iibiyaa gudaha Mareykanka ee Mareykanka iyada oo la adeegsanayo magaca sumadda 'Lupron', waxaana laga yaabaa in laga heli karo dalal kala duwan oo leh magac sumad ka duwan.
Inta badan noocyada kansarka qanjirka 'prostate' waxay kuxiran yihiin hormoonnada testosterone si ay ugu koraan oo ugu faafaan jirkaaga. Si kastaba ha noqotee, Leuprorelin acetate budada waxay ku shaqaysaa xakamaynta wax soo saarka hormoonnada testosterone taasoo ka dhigaysa inay fududaato yareynta koritaanka unugyada kansarka qanjirka 'sidoo kale waxay yareyneysaa xanuunka ama dhibaatooyinka ay la kulmaan bukaannada iyagoo kaadinaya.
Dhanka kale, Lupron waxaa adeegsaday dumarka si loogu daaweeyo astaamaha endometriosis, oo inta badan loo yaqaan uterine fibroids. Leuprolide acetate iyo uurku waa walaac weyn dumarka, ha qaadan dawadan haddii aad uur leedahay waxaadse kala tashan kartaa dhakhtarkaaga. Lupron waa daawo la isku duro oo muruqyada lagu duri karo bil kasta 1-6. Had iyo jeer iska hubi inaad ka qaadatid qiyaasta takhtarkaaga, laakiin sidoo kale waxaa lagu bari karaa sida aad isugu durto naftaada maareynta qiyaasta fudud ee raaxada gurigaaga.
Iibsashada Leuprolide acetate ayaa si sahlan looga heli karaa farmasiyada tooska ah ee tooska ah iyo kan tooska ah labadaba. Qiimaha leaprolide acetate mararka qaarkood way kala duwanaan kartaa iyadoo kuxiran meesha aad ka iibsatay. Si kastaba ha noqotee, had iyo jeer waxaa lagugula talinayaa inaad ka hesho warqadda saxda ah xirfadlaha caafimaadka. Xusuusnow xad-dhaafka ama si xun u isticmaalka leuprorelin acetate waxay kuu horseedi kartaa waxyeelo daran, waana inaad iska ilaalisaa qaadashada adigoon baarin baaritaan caafimaad. Kansarku waa cudur daran, waana inaadan qatar gelinin inaad dawadiisa si aan khasaare lahayn u qaadatid. Kala hadal dhakhtarkaaga wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan budada leuprorelin acetate budada qiyaasta.
Budada Leuprolide acetate waa awood gonadotropin ah oo sii deynaysa hormoonka soo dhoweynta (GnRHR) agonist, waxayna caddeysay inay lagama maarmaan u tahay codsiyada caafimaad ee kala duwan. Tusaale ahaan, daaweynta daweynta 'fibroids' uterine fibroids, kansarka qanjirka 'prostate', qaan-garowga hore ee qaan-gaarka ah (xaalad u horseedda carruurta inay gaaraan baaluqnimadooda xilli hore), iyo endometriosis. Dhamaan xaaladahan caafimaad, waxaa lagu isticmaali karaa leuprolide kaligiis ama dawooyin kale. Daawadan waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa daawooyinka kale si loo daweeyo dhiig yaraan, taasoo ka dhalatay utbine fibroids.
The qiyaasta leuprorelin acetate dose waa in lagu duro jirkaaga muruqyada. U adeegso irbadda insulin - ta ee U-100 si aad u maamusho qiyaastaada iyo sidoo kale inaad hubiso inaad isticmaasho sirinjiyeyaasha uu soo saaray soo-saaraha. Haddii ay dhacdo inaad isticmaasho irbado kala duwan, ka dib isticmaal kaliya 0.5-mL tuurista. Xusuusnow in budada leuprorelin acetate ay tahay in lagu qaso sida uu ku tilmaamay soo-saaraha kahor isticmaalka. Xakamaynta xalka waxaa laga yaabaa inaysan ku siinin isku-darka ku filan. Is-dhexgalka Leuprolide ayaa kaa caawin doona inaad gaarto natiijooyinka aad rabto laakiin had iyo jeer ka hel dhaqtarkaaga.
3. Sidee buu u shaqeeyaa 'leuprolide acetate'?
Habka loo yaqaan 'Leuprorelin acetate' ee ficilku wuxuu kuxiran yahay xaaladda caafimaad ee la daweynayo. Tusaale ahaan, marka loo isticmaalo daaweynta kansarka qanjirka 'prostate', waxay hoos u dhigeysaa soosaarka hoormoonka 'testosterone', kaasoo gacan ka geysan kara koritaanka iyo fiditaanka unugyada kansarka. In kasta oo budada Leuprorelin Acetate (74381-53-6) isticmaalku ma daaweynayo kansarka qanjirka 'prostate', wuxuu caawiyaa yareynta xanuunka iyo koritaanka unugyada kansarka ee jirkaaga ku jira. Si kastaba ha noqotee, daroogada ayaa la qaadi karaa keligiis, laakiin dhakhaatiirta caafimaadku waxay kugula talinayaan inaad si wada jir ah u qaadatid dawooyinka kale ee kansarka qanjirka 'natiijooyinka wanaagsan.
In kasta oo dawada aan loo oggolaan in loogu isticmaalo dumarka ku nool waddamada qaarkood, waxay caddeysay inay waxtar u leedahay daaweynta endometriosis. Halkan, dawadu waxay ku shaqaysaa xakamaynta wax soo saarka estrogen ee jirkaaga, taas oo caan ku ah "qalliinka estrogen". Halkan, habka loo yaqaan 'acupate acetate' ee Leuprorelin wuxuu si gaar ah diiradda u saarayaa yareynta estrogen-ka, hormoonka mas'uul ka ah caadadaada. Markaad bilowdo qaadashada qiyaasta leuprorelin acetate qiyaasta, heerarka estrogen-ka ayaa kacaya toddobaadyada ugu horreeya, ka dib markaas heerarka estrogen-ka ayaa hoos u dhici doona. Hawshani waxaa laga yaabaa inay si ku meelgaar ah u joojiso caadooyinkaaga, oo markaa natiijada, astaamaha 'endometriosis' laga soo deyn doono.
Leuprorelin acetate kansarka naasaha, dhanka kale, waxay ka caawisaa la dagaalanka cudurka dilaaga ah ee haweenka. In kasta oo progesterone iyo estrogen aysan ahayn sababta kansarka naasaha, waxay door muhiim ah ka ciyaaraan caawinta koritaankooda iyo fiditaankooda. Soo saarida labadan hoormoon ayaa lagu joojin karaa hanaan qalliin oo lagu baabi'iyo ugxan-sidaha ama habraaca caafimaad.
Hormoonnada luteinizing ee ay soo saarto qanjirka 'pituitary gland', ayaa kiciya soosaarka ugxanta iyo estrogen-ka ugxan-sidaha. Isticmaalka loo yaqaan 'leuprorelin acetate' wuxuu joojinayaa soo-saarka hormoonka luteinizing-ka, sidaa darteed wuxuu yareynayaa estrogen-ka iyo heerarka progesterone ee jirkaaga. Taas micnaheedu waa koritaanka unugyada kansarka iyo faafinta ayaa hoos loo dhigi doonaa, taasoo u sahlaysa kansarka naasaha in la xakameeyo.
Maamulka loo yaqaan 'leuprorelin acetate maamulka' waxaa lagu samayn karaa laba siyaabood oo waaweyn iyada oo loo maro duritaan toos ah ama budo, kuwaas oo sida caadiga ah dib loogu dhiso dareeraha ka hor qaadashada daawada. Dhakhaatiirtu waa dadka ugu wanaagsan ee fuliya labadeenna howlood, laakiin markii lagu tababbarayo, si fudud waad ugu samayn kartaa guriga.
(1) Cirbadda Leuprorelin acetate
Cirbadda Leuprorelin acetate waa dawo muddo dheer shaqeyneysa oo lagu durayo xanuun gal ah oo ay tahay inuu maamulo xirfadle caafimaad. Cirbadda waxaa badanaa la bixiyaa hal mar bil kasta ama xitaa hal mar 3, 4, ama 6 bilood iyadoo kuxiran xaaladaada. Dhanka kale, mudista leuprorelin acetate waxaa mararka qaarkood loo bixin karaa ganaax muddo-dheer u shaqeynayay oo loo yaqaan (Eligard) kaas oo lagu durayo muruqyadaaga 1, 3, 4, ama 6 bilood kasta.
Baadhitaan caafimaad ka dib, dhakhtarkaaga ayaa kaala talin doona sidoo kale kuu qori doona qiyaasta dawada ugu wanaagsan ee peptide budada ah. Waqtiga qaadashadaada qaadashada ay qaadan doonto sidoo kale dhaqtarkaaga ayaa go'aan ka gaaraya ka dib markii aad baarto xaaladaada. Cirbadaha ayaa sida caadiga ah ku kaladuwanaan bukaan ilaa mid kale.
(2) Dibu dhiska budada Leuprorelin acetate
Mararka qaarkood waxaad go'aansan kartaa inaad isticmaasho budada leuprorelin, taas oo sidoo kale ah qaab awood u leh dawadan awood u leh inay ka caawiso la dagaallanka xaaladaha caafimaad ee kala duwan, sida hore loo soo sheegay. Si kastaba ha noqotee, Leuprorelin acetate budada waa in si wanaagsan loo diyaarsado ama dib loo hagaajiyaa kahor intaan lagu durin muruqyadaada. Budada waxay u baahan tahay in la baaro oo ma aha inaad isticmaasho sirinjeerka wasakhaysan. Markaad diyaarineysid aaladda loo yaqaan 'leuprorelin acetate', isticmaal saliidaha soo saare daawada ay soo saartey. Ku wareeji tuubbada cad ilaa iyo ilaa uu bilaabo inuu leexleexo, hubi inaad ku hayso saliingaha si qumman. Hadda sii daaya tuubada adiga oo riixa tuubada si tartiib tartiib ah qiyaastii 8 ilbiriqsi ilaa topper-ka ugu horreeya uu gaaro khadka buluugga dhexe ee foosto. Waqtigaan oo dhan siringaha ha sii toosi.
Si tartiib tartiib ah isugu qas budada si aad u hubiso in ay sameyso xannib caano ah oo midaysan. Haddii ay dhacdo in ay budadu budada si buuxda ugu baxdo xalka, tuubbuuxi siringaha illaa ay qurubyada oo dhammi u milmaan. Ha qaadan qiyaasta haddii budada Leuprorelin Acetate (74381-53-6) gebi ahaanba ma noqon ganaax. Dib-u-dhiska ka dib, u qaad qaddarkaaga si dhakhso ah maadaama ka joojinta ay degayso muddo aad u yar gudahood. Sidoo kale, ha qaadan wax xannibaadda ah oo aan loo isticmaalin laba saacadood gudahood dib-u-dhiska sababta oo ah ma leh wax lagu keydiyo waxna ilaalin kara caafimaadkaaga.
Maamulka Leuprorelin acetate waa kaliya in la duri karo, waana inaad had iyo jeer ka qaadataa qaddarkaaga xirfad yaqaanka caafimaad natiijooyin wanaagsan. In alla inta aad ka shakisan tahay inaad qabtid xaalad lagu daaweyn karo budadaan peptide, waligaa ha iibsan oo ha bilaabin qaadashada adigoon mariin baaritaan caafimaad. Leuprolide acetate soo saareyaasha waxaa laga yaabaa inay muujiso qiyaasta daawada ee tilmaamaha isticmaalka, laakiin taasi waxaa laga yaabaa inaysan adiga kuu shaqeynin.
Jirka bini aadamka wuu kala duwan yahay, waxaana laga yaabaa in qaddarka qaarkood aad u sarreeyo inuu kuu muujiyo waxyeelooyin kaladuwan oo ah leuprolide acetate ama aad u hooseeya oo aad ku guuldareysato inaad gaarsiiso natiijooyinka la rabay. Qiyaasta daawada loo yaqaan 'Leuprolide acetate' waxay ku kala duwanaan kartaa qofba qof kale, waxaana sidoo kale lagu go'aamiyaa xaalada lagu daaweynayo iyo sidoo kale da'da isticmaalaha. Leuprolide acetate waa daawo ay tahay in loo qaato hagida takhtarka maadaama ay qatar keeni karto marka si qaldan loo isticmaalo ama si xad dhaaf ah loo isticmaalo. Waa kuwaan qaar ka mid ah qiyaasta leuprolide acetate qiyaasta xaaladaha caafimaad ee kala duwan;
Qiyaasta daawada leuprorelin acetate ee loogu talagalay kansarka qanjirka 'Prostate'
Halkan waxaa ku jira qiyaaso daawo oo kaladuwan oo laga yaabo inay jahwareer ku jiraan, laakiin dhakhtarkaaga ayaa kuu dooran doona midka kugu habboon adiga. Qiyaastu waa sida soo socota;
Cirbadaha 1mg hal mar maalintii
5mg duriinka xididka oo ay tahay in la qaato bishiiba mar.
Waxaad sidoo kale u tegi kartaa xNUMX mg oo aad qaadan doonto hal jeer seddexdii biloodba.
Waxa kale oo jira qiyaasta duriinka 30mg oo la qaato hal mar afartii biloodba mar.
45mg duriinka xididka oo aad qaadan doonto hal jeer lixdii biloodba.
Waxaad sidoo kale go aansan kartaa inaad aado 65mg maqaar-galaha maqaarka kaas oo ah waxoogaa dabacsan maadaama aad qaadaneyso qiyaasta hal mar bil kasta 12 bilood ama sanadkii.
Qiyaasta budada loo yaqaan 'leuprorelin acetate budada' ee loo yaqaan 'Endometriosis'
Qiyaasta lagu taliyey ee loogu talagalay bukaanka endometriosis waa 3.75mg, oo ay tahay in lagu mudo hal mar bishii qiyaastii lix bilood. Waxa kale oo jira ikhtiyaar kale oo takhtarkaagu kuu soo jeedin karo 11.25mg, kaas oo lagu duri doono hal mar saddexdii biloodba. Haweenka qaadanaya cudurka 'leuprorelin' ee endometriosis sidoo kale waa inay tixgeliyaan u socodka daaweynta bedelka hoormoonka, taas oo ku habboon yareynta astaamaha vasomotor iyo luminta cufnaanta macdanta ee lafaha. Si kastaba ha noqotee, miisaamidda faa'iidooyinka daaweynta kasta waa in sidoo kale la siiyaa mudnaanta markii la dooranayo nidaamka caafimaad ee saxda ah.
Qiyaasta daawada loo yaqaan 'leuprorelin acetate' ee loogu talo galay muddooyinka qaan-gaarka ah
Baaluqnimada precocious waa xaalad ay carruurtu ku horumariyaan astaamaha dadka waaweyn sidii la filayay. Markay qaan-gaarnimadu bilaabato ka hor da'da 8 ee gabdhaha iyo 9 ee wiilasha, waxaa loo arkaa inay tahay wax la jeclaado. Xaaladda waxaa lagu xakamayn karaa iyadoo la qaadanaayo qiyaasta leuprorelin acetate dose. Si kastaba ha noqotee, culeyska ilmaha ayaa go'aaminaya qiyaasta saxda ah ee daaweynta cudurka. Kala-goynta tallaalku waa sidan soo socota;
Jirka culeyska ka yar 25kg qiyaasta lagu taliyay waa mudista 7.5mg bishiiba hal mar
Ilmaha miisaankoodu yahay 25 illaa 37.5 kg waa inuu qaataa qiyaasta 11.25 hal mar bishii.
Carruurta ka sarreysa37.5kg, qiyaasta lagu taliyay waa duriinka 15mg hal mar bishii.
Markaad qaadaneyso qaddarka budada "Leuprolide", heerarka hoormoonka sidoo kale waa in la tijaabiyaa wixii ka dambeeya 1 ama 2 bilood kasta si loo hubiyo inay jirto xakamayn ku filan oo loo yaqaan 'pituitary gonadotropin'. Baadhitaan caafimaad oo joogto ah ayaa ka caawin doonta dhakhtarkaaga inuu la socdo horumarka daaweynta iyo sidoo kale wax ka qabashada wixii horumar ah ee dhici kara muddada daaweynta.
Xusuusnow, takhtarkaagu waa qofka saxda ah ee u dejin kara qiyaasta Leuprorelin dadka waaweyn iyo carruurta ka dib markii uu baaro xaaladda caafimaad. Mararka qaarkood waxaa lagugula talin karaa inaad ku bilowdo qadar yar, oo lagu hagaajin karo waqti kadib markaad fiiriso jawaabta jirkaaga. Leuprolide acetate iyo uurka looma ogola sababtoo ah daroogada ayaa waxyeelayn karta ilmaha aan dhalan. Haweenka waxaa lagula talinayaa in aysan qaadan dawadan budada ah ee loo yaqaan 'peptide' budada ah markii ay filayaan ama marka ay qorsheynayaan in ay uur yeeshaan waqti dhow.
Xaaladaha badan, markii aad si xun u isticmaasho ama aad si xad dhaaf ah u isticmaasho daroogo, waxay kuu gudbin doontaa waxyeelo daran; si kastaba ha noqotee, xoogga jidhkaaga ayaa mararka qaarkood go'aamin kara xoojinta saamaynta. Isla sidaas oo kale ayaa dhacda marka aadan raacin tilmaamaha qiyaasta qaadashada halka aad qaadaneyso leuprorelin acetate. Digniinta Leuprolide way kala duwanaan kartaa iyadoo ku xiran arrimo kala duwan, sida miisaanka jirka iyo u dulqaadashada jirka. Isticmaalayaasha qaarkood waxay la kulmaan waxyeelooyin xitaa marka ay qaataan is-dhexgalka leuprolide qaadashada qiyaasta hoose halka kuwa kale ay qaadan karaan qiyaaso aad u sareeya oo ay wali ku raaxeystaan ​​faa'iidooyinka
Way jiraan Dhibaatooyinka dawada leuprorelin acetate taasi waa la arki karaa ku dhawaad ​​isticmaale kasta, laakiin waqti ayey ku baaba'aan. Waxyeellooyinka dambe ee hore waa halis, isla marka aad la kulanto, waa inaad dhaqtarkaaga isla markaaba la socodsiisaa. Dhanka kale, waxaa sidoo kale jira waxyeelooyin dhif ah oo aad dhif u tahay inaad la kulanto inta aad qaadaneyso budada leuprorelin. Dhibaatooyinkaas soo raaca waa sida soo socota;
(1) Waxyeelooyinka caadiga ah ee leuprorelin acetate side effects
Xanuun agagaarka duritaanka
Xanuunada wadajirka ah
(2) Dhibaatada daran ee leuprorelin acetate side effects
Haddii aad la kulanto waxyeellooyinka soosocda ee soo socdaa raadso daryeel caafimaad sida ugu dhakhsaha badan ee aad karto;
Neefsasho aan caadi ahayn ama si dhakhso ah u neefsata
Cudur ama ciribida cagahaaga ama gacmahaaga
(3) Dhibaato aan caadi ahayn oo ku dhacda leuprorelin acetate
Waxa kale oo jira waxyeelooyin aan badnayn oo la xidhiidha dawadan. Si kastaba ha noqotee, way daran yihiin markay dhacaan. Sidaa darteed, waa inaad dhaqtarkaaga isla markaaba u sheegtaa ka hor inta uusan ka sii darin. Mararka qaarkood waxay kudhaceen xad dhaaf xad dhaaf ah, ama xasaasiyad waxayna ka mid yihiin;
Dhiigbax badan oo xubinta taranka haweenka ah.
Leuprolide acetate iyo sonkorowga sidoo kale saameyn kale oo dhif ah oo aad la kulanto. Daawada ayaa la sheegay inay kordhineyso halista cudurka macaanka.
Dumarka codkooda oo sii kordha
Gabagabadii, leuprorelin acetate wuxuu cadeeyay inuu yahay dawo weyn marka si sax ah loogu isticmaalo adduunka caafimaadka. Isla mar ahaantaana, leaprolide acetate iibsiga ayaa laga heli karaa farmasiga kuugu dhow, waxaad sidoo kale amar ku bixin kartaa dukaamada internetka ee kala duwan. Waxaa jira dad badan oo soosaarayaasha burooyinka loo yaqaan 'leuprolide acetate' iyo alaab-qeybiyeyaasha suuqa maanta, laakiin marwalba hubso inaad sameyso cilmi-baaristaada si aad u hesho badeecad tayo leh qiimo macquul ah. The qiimaha leuprorelin acetate way ku kala duwan yihiin hal iibiye, waana sababtaas sababta aad ugu baahan tahay inaad sameyso daraasad sax ah ka hor intaadan iibsan daawada. Si kastaba ha noqotee, ha qaadan kansarka naasaha leuprorelin acetate ka hor inta dawada saxda ah aad ka helin takhtarkaaga.
Heesta, G., Gao, H., & Yuan, Z. (2013). Saamaynta leuprolide acetate ee shaqada ugxansidaha kadib cyclophosphamide – doxorubicin-ku saleysan kimmotherapy ee bukaanka premenopausal ee qaba kansarka naasaha: natiijooyinka ka yimid wejiga II tijaabin aan kala sooc lahayn. Caafimaadka oncology, 30(3), 667.
Köhler, G., Faustmann, TA, Gerlinger, C., Seitz, C., & Mueck, AO (2010). Qiyaasta xaddiga study daraasadda si loo go'aamiyo waxtarka iyo badbaadada 1, 2, iyo 4 mg ee dienogest maalin kasta ee endometriosis. Joornaalka Caalamiga ah ee Caafimaadka Haweenka & Dhalmada, 108(1), 21-25.
Tunn, UW, Gruca, D., & Bacher, P. (2013). Lix bilood oo lepororelin acetate depot formula oo ah kansarka qanjirka 'prostate': qiimeyn caafimaad. Wax ka qabashada caafimaad ee gabowga, 8, 457.
Johnson, SR, Nolan, RC, Grant, MT, Price, GJ, Siafarikas, A., Bint, L., & Choong, CS (2012). Abuuritaanka qalliinka unugyada ee 'dheecaannada' burooyinka ah ee la xiriira hab-dhiska 'lepotrorelin acetate' ee daaweynta unugyada qaan-gaarka ah ee qaan-gaarka ah. Joornaaliista carruurta iyo caafimaadka carruurta, 48(3), E136-E139.